Xasuuqii Gololey oo dad loo qabtay iyo cadeymo la helay - Caasimada Online
Home Warar Xasuuqii Gololey oo dad loo qabtay iyo cadeymo la helay
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga dowlad goboleedka Hir-Shabeelle u qaabilsan baaritaanka dadkii lagu laayey deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in xogo muhiim ah oo ay heleen ay muujinaayaan in la heli karo faahfaahino ku saabsan dadkii ka dambeeyay falkii lagu laayey dhakhaatiirtii deegaanka Gololey.
Wasiirka amniga Hir-Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre oo wareysi siiyey Idaacadda Kulmiye ee magalaada Muqdisho kana mid ah xubnaha Hir-Shabeelle u qabilsan baaritaanka dhacdadaas, ayaa sheegay in haatan ay helayaan cadeymo hor dhac ah, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay warbixin dhameystiran u soo saari doonaan.
Wasiir Kheyre oo ka gaabsaday in si dhameystiran uu u soo bandhigo cadeymaha ay heleen illaa hada ee ku xeran dhacdadii lagu laayey dhakhaatiirta, ayaa sheegay in raadad badan ay u muuqdaan hadii uu hada shaaciyana ay dhib u keeni karto baaritaanka socda.
Wasiirka ayaa xaqiijiyey in la hayo gaari Caasi ah, milkiilihii lahaa iyo laba nin oo wadayaal ka ahaa gaariga, kuwaas oo hada loo soo gudbiyey xarunta dembi baarista booliska Soomaaliya ee CID-da ee Muqdisho, si loo baaro.
Wasiirka amniga Hir-Shabeelle waxa uu sheegay in gaarigaas looga shakisanyahay in uu yahay kiin dhakhaatiirta la laayey looga qaaday xaruntii ay ka shaqeynayeen ee deegaanka Gololey.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in dadka loo xiray dhacadaas ee baaritaanadu ku socdaan ay ka mid yihiin qaar ka mid ah shaqaalihii xarunta caafimaad kala shaqeynayey dhalinyarada la laayey, kuwaas oo shaqada ka baxay saacad ka hor inta aan la kaxeysan dhakhaatiirta la dilay.
Qaar ka mid ah shaqaalaha xarunta caafimaadka ee dhakhaatiirtii la dilay ay ka howlgelayeen ayuu cadeeyey in Muqdisho loo soo qaaday si loo baaro, halka kuwo kalena ay ku xiranyihiin saldhigga booliska ee degmada Balcad.
“Dad Soomaaliyeed oo intaas dhan oo la xasuuqay baaritaankoodu dabcan mudo ayuu qaadanayaa, laakiin waxaan rijeyneynaa, in waqti dhaw oo aana hadda cayimi karin aan soo bandhigno warbixin waafi ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan” ayuu yiri wasiirka aminiga Hir-Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre.
Ugu dambeyn wasiirka ayaa balan qaaday in baaritaankoodu uu noqon doono mid dhan walba ka dhameystiran, isla markaana uusan lamid noqon doonin kuwii hore ee natiija la’aanta ku dhamaan jiray.